५ सय चोरेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको सम्पत्ति ? जान्नुहोस् – Online Khabar 24
November 23, 2021 by admin admin
काठमाडौं। पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्यान हुन्छ।
रिपोटर्स क्लब नेपालका सभापति, प्राइम टिभीका अध्यक्ष, नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष र रिपोटर्स नेपाल डटकमका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादकका रुपमा क्रियाशील धमला ‘धमलाको हमला’ र ‘जनता जान्न चाहन्छन्’
नामक टक शो बाट नेपाली दर्शक स्रोतामाझ प्रस्तुत भइरहेका छन्।घरबाट बुवाको ५०० चोरेर काठमाण्डौ छिरेका धमलासँग कसरी यति धेरै सम्पति भन्ने कुराको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक नै हो। थुप्रै सञ्चारगृहको मालिकका रुपमा रहेका धमला सम्पत्ति मेहनतले नै कमाएको दाबि गर्छन्।
यो कुरा उनले नोभेम्बर ७ , २०२० को ग्ल्यामरगफको एपिसोडमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै प्रकाश सुबेदीले घरबाट बुवाको ५०० चोरेर काठमाण्डौ छिरेको धमलासँग कसरी यत्रो सम्पति र पहुँचबारे प्रश्न उठाएका थिए। तर ऋषि धमलाले त्यसको उतर मेहनत गर्ने जो कोहिले पनि सम्पत्ति कमाउन सक्छ भन्दै जवाफ दिएका थिए। यो खबर साभार गरियको हो।
Prevपिकनिक खान गएका मेयरका छोराको पिकनिक स्थलमै मृ’त्यु !
nextबैंकका कर्मचारीलाई अब हप्ताको तीन दिन छुट्टी !